केही मिनेटमै अनुहार गोरो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी मध्ये कुनै एक उपाय प्रयोग गरेर त हेर्नुहोस् – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/केही मिनेटमै अनुहार गोरो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी मध्ये कुनै एक उपाय प्रयोग गरेर त हेर्नुहोस्
केही मिनेटमै अनुहार गोरो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी मध्ये कुनै एक उपाय प्रयोग गरेर त हेर्नुहोस्
काठमाडौँ । मानिस आफ्नो अनुहार सकेसम्म गोरो बनाउन प्रयासरत हुन्छन् । कतिपय गोरा व्यक्तिहरु पनि अनुहारको गोरोपनमा कमी आउनुको कारण तनावमा हुन सक्छन्। विभिन्न कारणले मानिसहरुको गोरोपनमा कमी आउँछ, जस्तैः टन्टलापुर घाम, प्रदूषण, अनुहारको दाग धब्बा आदि।
यस्ता सपना देख्ने व्यक्ति बन्छन् भविष्यमा धेरै धनी, तपाईले पनि देख्नुभयो की ?
भाग्य बदलिन छोरी नै जन्मिनु पर्छ !